Free online ọrụ. Ihe steepụ kpọmkwem
Ngụkọta oge nke ogologo steepụ si ihe
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 0.25 0.5 1 1.5 2 3 4
The elu nke n'ọkwá Y
Na ogologo nke n'ọkwá X
Ogologo nke n'elu ikpo okwu A
The ọkpụrụkpụ nke na mpe mpe akwa B
Agbakwunyere ọkpụrụkpụ Z
ntule nzọụkwụ F
The ọkpụrụkpụ nke nzọụkwụ G
Mkwado iberibe na ogbo K
Nyere na ịgbakọ a ogologo ubube n'ebe ihe
Na ngụkọta oge, ị nwere ike họrọ ihe abụọ na ụdị ihe owuwu nkebi.
Size designation monolithic ihe steepụ
X - Na ogologo nke n'ọkwá
W - The obosara nke steepụ.
A - Ogologo nke n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ndị a haziri nke gị steepụ bụ adịghị ama egwuregwu, setịpụrụ na ogologo nke n'elu ikpo okwu = 0.
В - The ọkpụrụkpụ nke na mpe mpe akwa.
Z - Agbakwunyere ọkpụrụkpụ. E n'ime akaụntụ naanị na ndị oge gboo ịke nke steepụ.
F - Ntule nzọụkwụ.
G - The ọkpụrụkpụ nke nzọụkwụ. Na kpochapụwo ụdị n'ọkwá na-eji dị a egbugbere ọnụ ọkpụrụkpụ F.
Mkwado monolithic akwa mgbago.
Mkwado ejikari naanị na ụdị 1 monolithic akwa mgbago.
Otú ọ dị, ya niile na-adabere na gị oru ngo.